FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SAINT DANE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Saint Dane
Alika masina mifangaro mifangaro i Saint Bernard / Great Dane
Alika kely mifangaro Teddy the Saint Bernard / Great Dane amin'ny faha-4 taonany sy ny palitaony voaharatra mandritra ny volana fahavaratra
Ny Saint Dane dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Saint Bernard ary ny Great Dane . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
alika mpiambina alemanina bernese mixer
Bella the Saint Dane amin'ny faha-19 volana— 'Bella dia alika tsara fanahy be izay tia milalao ary manohy mandeha . Matetika izy dia tsy mahatsapa azy Size , ary rehefa miondrika amin'ny famihina izy, na mamihina, dia mandona anao izy. Tsara amin'ny ankizy sy olon-dehibe hafa izy, ary tiany ho ivon'ny fiheverana. Izy dia tena miaro, ary tsy mivadika, ary tena tsara miaraka saka . Milanja 135 kilao i Bella. '
Harley (Iray amin'ireo zanakalahin'i Xena sy Gunner) 3 taona, milanja 185 lbs., Sary natolotr'i East Coast Bernadanes - voasoratra anarana ny CKC
Gunner (lahy) amin'ny 4 taona, milanja 175 lbs., Sary natolotr'i East Coast Bernadanes - voasoratra anarana ny CKC
Xena (vehivavy) 5 taona, milanja 135 lbs., Sary natolotr'i East Coast Bernadanes - voasoratra anarana ny CKC
Mattingly (Iray amin'ireo zanakavavin'i Xena sy Gunner) 2 taona, milanja 140 lbs., Sary natolotr'i East Coast Bernadanes - voasoratra anarana ny CKC
'Diesel the Great Dane / Saint Bernard mix — ny rainy no Great Dane ary ny reniny dia Saint Bernard. Ny ray aman-dreny sy ny reny dia purebred. Sivy volana izy, milanja 100 kilao amin'ity sary ity. '
jack russell terrier weiner alika mifangaro
Diesel the Great Dane / Saint Bernard mix (Saint Dane) toy ny alika kely 10 herinandro
vavorona orona mena
'Bibikely kely hybrid Saint Bernard / Great Dane efa-andro - ny anaran'ny reniny dia Alaska ary ny anaran'ny dadany dia Scooby. Ny ray aman-dreny sy ny reny dia alika mianjady amin'ny fianakaviana ary mahafinaritra ny olona. Mampahafantatra anay foana i Neny rehefa akaiky ny oram-baratra na loza. Manana fahatsapana fahenina lehibe izy. Tsy andrintsika izay hahitanao ny haben'ny haren'ireto zaza ireto. '
Lucas the Great Dane / Saint Bernard mampifangaro alika kely amin'ny 4 volana
Lucas the Great Dane / Saint Bernard mampifangaro alika kely amin'ny 5 herinandro
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Saint Dane
Saint Dane sary 1
Lisitry ny Dog Dane Mix Great Dane
lavaka sy shar pei mix
sary plott nanenjika alika kely
fifangaroana poodle mainty sy fotsy
inona ny alika manana lela manga
mt fiste amidy
sary alemà shorthair alika kely
5 volana Labrador retriever